China Umatshini wokuPakisha oCwangcisiweyo kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Izinketho zethu zokupakisha ezinokubandakanya ziquka ukhetho lwezinto zokwakha ibhegi yakho ngaphandle kwezo mveliso kunye / okanye indawo yokuhlala (ekhaya) enokuchuma. Uninzi lwezixhobo zethu ezingama-5000 zezinto ezinenzuzo kodwa zikwabonelela ngesithintelo osidingayo ukukhusela imveliso yakho kunye nokubonelela ngozinzo kwishelufu. Sine FCN ezivunyiweyo zezisombululo zokupakisha eziza kugalela umgquba phantsi kweemeko, zenziwe ngezixhobo ezinokuhlaziywa. Ezi zinto ziyinyani yetekhnoloji yokuthintela. Sisoloko sisebenzisana nabenzi beefilimu ukubonelela abathengi bethu ngezona zinto zintsha zithintelweyo, ezenziwe nge-bio-plastiki ezifana neSwekile, umbona kunye necasava.
Iimveliso ezinobuhlobo kunye noGreen
Zombini ezinokuphinda zisebenze kwakhona kunye ne-ambient compostable zombini ziyafumaneka.
Izithintelo eziphuculweyo kunye nokukhetha okuninzi.
Izinto zokuPakisha ezinokuQiniseka
Ukubonelela abathengi ngezona zinto zihambele phambili kwiimveliso ezinokusebenziseka, sisebenza nababoneleli ngefilimu / i-laminators ngokhetho olubanzi lwezinto ezinomgquba kunye nezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane. Izinketho zokupakisha ezinenzuzo ziyaguquka kwaye zihlala zitshintsha, kwaye siceba ukongeza ezinye izinto eziphathekayo kwixesha elizayo.
I-BioKraft / iBioClear
I-BioCareKraft kunye ne-BioClear zizinto zokupakisha ezingachumanga ezilungele izinto ezininzi zokutya ezomileyo nezomileyo. Zombini ezi zinto zinika ukhuseleko kuthintelo kwaye zingenziwa umgquba. Sinezinto ezininzi onokukhetha ukuzinyusa ukwandisa isibheno esibonakalayo kunye nomqobo.
Amanqaku amaxabiso angaqhelekanga kunye nobungakanani beodolo
Iyahambelana noninzi lwengxowa yoqwalaselo
Izatifikethi zokuPakisha ezinokuLunga
Kukho amanqanaba amaninzi okuqinisekiswa, zombini yimibutho yoshishino kunye nemibutho karhulumente. Ngokubanzi zimbini iintlobo zokupakisha umgquba kuqala zezinto ezinokuveliswa zokwenza imveliso, ezinokuthi zenziwe umgquba kwisichumisi semizi-mveliso, kwaye okwesibini zizichumisi zasekhaya (ezijikeleze) ezinokuthi zigalele umgquba phantsi kwemeko zokugalela umgquba ekhaya. Inkqubo yokwenza umgquba ifuna indibaniselwano yamaqondo obushushu, ubomi bentsholongwane, amanzi, ioksijini, kunye nezinye izinto.
Izikimu ezininzi zokulebhelisha ziye zaphuhliswa zichonga iimpawu zokuchumisa kunye nokulahla kwezinto zokupakisha ezinomgquba. I-DIN Certco kunye neVincotte yile mibutho mibini inyanzelisa le migangatho yeelebheli.
Eco-Kulungile Ukunciphisa Ikhuselekile kwaye isempilweni
Iicwecwe eziValiweyo eziCwangcisiweyo ezi-3
Yima Phama Pouches
Iipakethi zeGusset ezisecaleni
Iipakethi ezisezantsi zeFlat ezinokuCwangciswa
Ifilimu yokuPakisha eyiCompostable
Egqithileyo Yima up ingxowa / Zip Lock Plastic Bag / Yima Up yakutya Nge uziphu
Okulandelayo: Gcina iiphakheji ezinokuphinda zisebenze kwakhona